OTU ESI EME KA DATA ANALYSIS NA EXCEL - EXCEL - 2019
Kwado Ngwaọrụ Nyocha Data na Microsoft Excel
Tunngle bụ usoro ihe omume nke nwere usoro mgbagwoju anya ma ọ bụghị mgbe niile. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na nke a ma ọ bụ nke mmebi ahụ nwere ike ime ọtụtụ mgbe. Tunngle na-enye ihe dị ka akụkọ 40 banyere ọdịda dị iche iche na njehie, nke a ga-agbakwunyere na ọnụọgụgụ nke nsogbu ndị ahụ na usoro ahụ n'onwe ya enweghị ike ịkọ. Anyị ga-ekwukwa banyere otu n'ime ndị kachasị ewu ewu - Njehie 4-109.
Njehie 4-109 na Tunngle na-akọ na usoro ihe omume ahụ adịghị ebido nkwụnye ihe nkesa. Nke a pụtara na Tunngle enweghị ike ịmalite ihe nkwụnye ya ma jikọọ na netwọk na nnọchite ya. N'ihi ya, ngwa ahụ enweghị ike ijikọ ma rụọ ọrụ ya kpọmkwem.
Ihe kpatara nsogbu a nwere ike ịdị iche, mana ọtụtụ n'ime ha na-abịa n'ụzọ na-ezighị ezi. N'ime usoro ya, onye nhazi ahụ na-anwa imepụta ihe nkwụnye nke ya na ikike kwesịrị ekwesị na usoro ahụ, ọnọdụ ụfọdụ nwere ike igbochi ya. Ọtụtụ mgbe, usoro nchekwa kọmputa - mmemme firewall na antivirus - bụ ọrụ maka nke a.
Mbụ ịkwesịrị iweghachị ihe omume ahụ.
Mbụ ị ga-aga "Nhọrọ" ma wepu Tunngle. Ihe kachasị mfe ime bụ site "Kọmputa"ebe ị chọrọ pịa bọtịnụ na usoro ihe omume - "Hichapụ ma ọ bụ gbanwee usoro ihe omume ahụ".
Ngalaba ga-emeghe. "Ngalaba"nke enwere mwepụ nke mmemme. N'ebe a, ị ga-ahụ ma họrọ Tunngle, mgbe nke ahụ ga-apụta bọtịnụ ahụ "Hichapụ". Ịkwesiri ịpị ya.
Mgbe mwepụsịrị, ịkwesịrị ịchọpụta na ọ dịghị ihe ọ bụla fọdụrụ n'ime usoro ihe omume ahụ. Site na ndabara, o debere na:
C: faịlụ mmemme (x86) ntụgharị
Ọ bụrụ na nchekwa tunngle na-anọgide ebe a, ịkwesịrị ka ihichapụ ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, ịkwesịrị ịmalitegharịa kọmputa ahụ.
Ntuziaka ndị isi na saịtị ahụ Tunngle na-atụ aro ịgbakwunye usoro mmemme iji wepụ ihe nchọgharị antivirus. Otú ọ dị, ụzọ kachasị ịtụkwasị obi bụ iji gbanyụọ ya n'oge nrụnye. Ọ dị mkpa ka ị ghara ichefu ịgbanwuo nchedo mgbe usoro ahụ gasịrị - ngwa ahụ chọrọ ka ọdụ ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ, nke a na-emekwa ka egwu ndị ọzọ dị na nchebe nke usoro ahụ.
Ọ ga-adị mma iji gbanyụọ firewall.
Gụkwuo: Otu esi gbanyụọ ọkụwall
A na-atụ aro ka ị na-agbazi tunngle installer dị ka onye nchịkwa. Iji mee nke a, pịa faịlụ ahụ na bọtịnụ òké aka ma họrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị na menu ndozi. Enweghị ikike ndị nchịkwa nwere ike igbochi mgbakwunye nke ụfọdụ iwu.
Mgbe nke ahụ gasịrị, e kwesịrị itinye nhazi ahụ n'ọnọdụ nkịtị. Mgbe akwadoghị njedebe iji mee ngwa ngwa ahụ, ị ​​ga-ebu ụzọ malitegharịa usoro ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ihe niile kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma.
Nke a bụ ndụmọdụ ntụziaka maka ịhazigharị usoro ihe a, ọtụtụ ndị na-akọ na nke a na-ezukarị. Njehie 4-109 bụ ihe a na-ahụkarị, a na-edozi ya n'enweghị mkpa maka ntinye ederede nke ihe ntanetị netwọk ma ọ bụ na-egwu n'ime ndekọ.